सुहागरातमै गरे पतिले यस्तो कुकर्म, नव विवाहिता श्रीमती बनिन् बेहोस – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/सुहागरातमै गरे पतिले यस्तो कुकर्म, नव विवाहिता श्रीमती बनिन् बेहोस
सुहागरात जीवनभरका लागि सम्झनयोग्य हुनुपर्छ । तर, पहिलो सुहागरात नै झण्डै का*ल बनेर आईलाग्दा एक नवविवाहिता दुलहीको मनमा कति चोट पर्ला ?
यस्तै घटना छिमेकी देश भारतका घटेको छ । बिहेको पहिलो रात नै श्रीमानले गरेको कुकर्मले नवविवाहित श्रीमतीको झण्डै कालको मुखमा परेकी छन् । यो घटना भारत उत्तर प्रदेशको हो । पिताको घरबाट खुशीसाथ बिदा भएर उनी आफ्नो घरमा पुगिन् । उनका माइतीलाई एउटै कुरामा सन्तोष थियो कि–उनकी छोरीले राम्रो घरबार पाइन् । अब उनी घरमा सबैलाई रिझाएर बस्नेछिन् । तर परिवारको यो खुशी चकनाचुर हुन बेर लागेन ।
भारतको उत्तर प्रदेशको बागपतमा ती बेहुलीको बिहे भएको थियो । उनको बिहे बागपतकै सिंघावली हरि क्षेत्रमा भएको थियो । उनका पति बागपतमै शिक्षक हुन्् । ती बेहुलीका दाजुका अनुसार बिहेको भोलिपल्ट गोदभराइको रिवाज हुन्छ । यसका लागि उनी बहिनीलाई लिन गए । त्यहाँ उनकी बहिनीलाई सञ्चो नभएको जानकारी दिइयो । कोठामा उनकी बहिनी बेहोस भएर लडेकाी थिइन् । परिवारले के भएको भन्नेबारे स्पष्ट जवाफ दिएनन् । त्यसपछि उनी बहिनीलाई लिएर धेरै अस्पतालमा गए तर डाक्टरले उपचार गर्न नसक्ने जवाफ दिए ।
त्यसपछि दाजुले सुहागरातका दिन उनका पतिले नै यो सब गरेको किटानी जाहेरी दिएका छन् । यद्यपि यो सब उनले किन गरे भन्ने खुल्न सकेको छैन । पति फरार छन् र पत्नी अहिलेसम्म बेहोश छिन् । जसका कारण त्यो रात के भएको थियो भन्ने बताउने कोही छैन । घटनाबारे यथार्थ थाहा पाउन पति पक्राउ पर्नुपर्ने वा पत्नी होशमा आउनुपर्ने अवस्था छ ।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
प्रहरीले फरार पतिको खोजी गरिरहेको छ । पछि उनले बहिनीलाई लिएर गाजियाबादको मोहननगर अस्पतालमा लिएर गए । त्यहाँ जाँदा डाक्टरले निकै आश्चर्यजनक कुरा बताए । डाक्टरका अनुसार ती नव विवाहिताको गुप्ताङ्गमा धारिलो रडले प्रहार गरिएको थियो । जसका कारण गुप्ताङ्गमा गहिरो चोट लागेको छ । गर्भाशयमा समेत गहिरो चोट लागेको चिकित्सकहरुले जानकारी दिएका छन् । उनको अहिले उपचार भइरहेको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस : अचम्मको गाउँ, जहाँ ४ सय वर्षदेखि कुनैपनि महिलाले बच्चा जन्माएका छैनन् !
हाम्रो समाजमा अनेकौं किसिमका मान्यताहरु हुन्छन्, चालचलन र रीति रिवाज पनि समाज अनुसार फरकफरक हुन्छन् । तर कुनै कुनै ठाउँहरुमा यस्ता संस्कार छन् जहाँ महिलाले गाउँमा नै बच्चा जन्माउन पाउँदैनन् ।
एउटा यस्तो ठाउँको कल्पना गर्नुहोस् जहाँ बच्चा जन्माउन बर्जित छ । तर, यो कल्पना मात्र होईन वास्तविकता पनि हो । यस्तो चलन एक दुई वर्षको होईन, विगत चार सय वर्ष देखि मानिँदै आएको छ ।
सुन्दा पनि पत्यार नलाग्ने यो वास्तविक चलन हो, भारतको मध्य प्रदेश स्थित एउटा गाउँको । राजगड जिल्ला अन्तर्गत पर्ने उक्त गाउँका महिलाले विगत चार सय वर्ष पहिलेबाट गाउँमा बच्चा जन्माएका छैनन् ।
सिङ्क श्याम जी गाउँ निवासीहरूले उनीहरुको गाउँमा बच्चा जन्माउनु अभिशाप भएको विश्वास गर्छन् । यसकारण त्यहाँका महिलाहरु विगत चार सय वर्ष देखि बच्चा जन्माउनका लागि आफ्नो गाउँ छाडेर अन्तै जानुपर्ने चलन छ ।
यदि उक्त गाउँमा कसैले बच्चा जन्मायो भने की त्यो बच्चा विकृत हुनेछ वा आमा वा बच्चाको मृत्यु हुन्छ भन्ने उनीहरुको विश्वास छ । श्याम जी गाउँका बुढापाकाहरुका अनुसार १६ औं शताब्दीमा त्यहाँ देवदूतहरुले एउता मन्दिर बनाएका थिए । उक्त मन्दिरमा एक महिलाले गहुँ पिसेकी थिईन् । त्यस कारण देवदूतहरु रिसाए र धेरै विचलित भएका थिए ।
सोही कारणले देवदूतहरुले त्यो गाउँमा कुनैपनि महिलाहरुले बच्चा जन्माउँन नसकुन् भनेर श्राप दिएका थिए । त्यहि श्राप लाग्ने हुँदा अहिले पनि गाउँमा महिलालाई बच्चा जन्माउन नदिने गरिएको जानकारहरुले बताउँछन् ।
गाउँका एक मुर्तिकारका अनुसार गाउँमा मन्दिर निर्माण हुँदैगर्दा एउटी महिलाले अवरोध गरेकी थिईन । त्यसकारण गाउँका सबै महिलाहरुलाई श्राप लागेको हो । उनी भन्छन्, ‘प्रसवमा रहेका ९० प्रतिशत महिलालाई अस्पतालमा राखिन्छ भने केहिलाई गाउँ बाहिर लगिन्छ ।’
अहिले पनि त्यहाँका महिलाहरुले बच्चा जन्माउनका लागि गाउँ बाहिर छाप्रो निर्माण गरी त्यहि बच्चा जन्माउने गरेका छन् । आजको वैज्ञानिक र आधुनिक युगमा पनि यस्ता मान्यता भने कायमै रहनु अचम्मको कुरा हो ।
कुखुरामा आयो नयाँ सरुवा रोग, भटाभट लाखौ कुखुरा मरे
१४ बर्ष बिदेश बसेर फर्किदा न श्रीमान हुनुहुन्छ न त छोरा नै , हेर्नुहोस
बिर्तामोड’मा आफ्नै घरको आँगन’मा अ’र्ध’न’ग्न अ’वस्था’मा २५ वर्षीया सिर्जना बस्नेत’को श’व फे’ला !